Iskisofareniya | Suomen Mielenterveysseura
Iskisofareniya waa xanuun guud oo ka mid ah xanuunada dhimirka, lehna astaamaha waalidda. Iskitsofareniya inta badan waxaa lagu sharxaa sida isku dhex yaacidda maskaxda: xanuun saameeya fekerka, dareenno iyo dabeecado qofka xanuunsan ku adkeeya arrimo badan oo muhiim ah oo ah waxa bini’aadanku qabto. Waxaa ka mid ah calaamadaha Iskisofareniyada sida muuqaalo dhalanteed iyo khayaali ah, hadal iyo hab dhaqan dhamaan isku qasan, hammi la’aan iyo dareen la,aan.
Iskitsofareniya waxaa la ogaan karaa dhalin yaranimada, laakiin waa suurtogal in astaamihiisa ay bilaawdaan caruurnimada ama da’da dhexe ee qofka. Xilliga waalida astaanta kowaad waxay marmar noqon kartaa mid degdeg ah oo xooggan, Mararka qaarkood astaamuhu waxay noqdaan kuwo si tartiiba u kordha usbuucyo ama bilo gudahood.
Baxnaaninta dadka leh calaamadaha Iskisofareniyada waxay ku xiran tahay inta badan sida daryeelka loogu najaxo. Daryeel la’aanta astaamuha muddada dheeri waxay sababi karaan dhibaatooyin xun oo dhanka shaqada ama dhanka xidhiidhka dadka ah, dhanka kale daawada waalida oo la bilaabaa waqti hore oo weliba ay la socdaan daryeello kale waa suurtogal in noloshu noqoto mid wanaagsan oo madaxbanaan.
Marka dhakhtarku soo cadeeyo Iskisofareniyada daaweynteedu waxay qaadaneysaa marwalba muddo dheer iyo waxaa kaloo lala xidhiidhaya habab daryeel kale oo dhawr ah iyadoo loo eegayo baahida qofka iyo qaraabadiisa. Ogaanshaha astaamaha cudurka kadib waxa lagu daweyn karaa hab dawo, teraabiyada cilminafsiga iyo habab kale oo daryeelka dhanka bulshada ah. Ujeedada daryelka iyo baxnaaninta waxa looga gol leeyahay yareynta astaamaha cudurka, hagaajinta xidhiidhka bulshada, maareynta cudurka iyo la qabsashada caawinaadda dhanka qoyska iyo qaraabada. Akhri Raadsashada daryeelka.
Khayaali waxay noqon karaan tusaale ahaan in qofku isu arko inuu yahay qof kale, wuxuu ka baqaa inay jiraan wax kor ka koontoroola ama basaasaya. waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu dembi isku saaro waxaan jirin oo aan dhicinba ama uu aamino inuu yahay qof loo xushay inuu fuliyo waxyaabo khaas ah. Khayaaligaas waxay la xidhiidhi karaan xataa dhanka diinta, qofka qaba fekerka khayaaliga ah wuxuu u maleeyaa tusaale ahaan inuu arko sheydaan ama ilaahay.
Maqlidda codadka ayaa ah dhalanteedka guud. Codadku waxay noqon karaan kuwo eedaymo ah ama cadho ah, waxaa laga yaabaa iney yihiin codadka qaraabada ama kuwo aan la aqoon. Marmarka qaarkood codadku waxay isu bedelaan sanado kadib kuwo la jecleysto. Qofka maqlaa codadkaas marmar wuxuu dhagaha gashadaa isteeriyo ama wuxuu dheereeyaa codka teleefishinka, isagoo isku deyaya in uusan codadkaas maqlin.
Inkasta oo aysan jirin codad uu qofku maqlayo, laakiin maskaxda ayay ka imanayaan, kuwaas oo qofku u maleeyo inay dhab yihiin oo ay ka imanayaan meel kale. Dadka u dhaw qofka maqlaya codadka waxay u sheegaan ineysan maqleynin wax codad ah, laakiin si kastaba ha ahaatee wuxuu aaminsan yahay in codadka uu maqlayo ay dhab yihiin oo aysan maqleyn dadka u dhowi.
Codad maqliddaas waxa soo raaca ama taa bedelkeeda ah oo iskitsofereniyada la xidhiidhi karta waxyaabo kale oo dhalanteed ah. Dadka leh calaamadahaas waxay dareemaan in jidhkooda ay sheyaal ama walxo kala duwani ku jiraan ama ay dareemaan dhadhan ama ur, taas oo aan aheyn wax jira. Maqlidda codadka noocaas ah ee dhalanteeka ah waa wax caadi u ah dadka la ogaaday inay qabaan iskitsofarenida. Ma ah marwalba dadka maqlaa codadkaas inay micnaheedu tahay inay qabaan xanuunka iskisofarenida. Maqlidda codadka waxay la xidhiidhi karaan tusaale ahaan xaaladaha murugada naxdinta leh, welwel iyo walaac daran ama isticmaalka mukhaadaraadka badan. sidoo kale niyadjabka waalida ama labamiyirlenimada xanuunka dhimirka dadka leh waa laga yaabaa inay maqlaan codad.
In badan oo ka mid ah dadka finnishka ayaa lagu qiyaasay inay noloshooda mar uun maqlaan codad. Qaarkood mar kaliya ayay codad maqlaan, qaar kalena waxay maqlaan codadka muddo dheer. Dadka maqla codadka muddo dheer waxay leeyihiin ururka Suomen moniääniset oo hoos taga Mielenterveyden keskusliitto.
Xanuunada fekerka waxaa la xidhiidha ku adkaanshaha qorsheynta arimaha, ama xoog saaridooda iyo xusuusnaanta arrimaha muhiimka ah ee howl maalmeedka. Qofku wuxuu dareemaa fekerka oo luma ama wada xidhiidhka dadka oo adkaada.
Rabi taan la,aan
Rabi taan la, aan macnaheedu waa qofka oo aan awoodin inuu qabto arrimo khaas u ah ama maba awoodo inuu waxqabsado. Nolol maalmeedka caadiga ah sida qubeyska, oo noqon kara mid si aan macquul ahayn ugu adkaada.
Dareen xumo micnaheedu waa awood la’aan dhanka dareenka. Mararka qaarkood xitaa dareenadu waxay yihiin kuwo gurracan marka loo eego nolosha caaadiga ah; bukaanka skisofareniyada waxaa laga yaabaa in uu usoo bandhigo arimaha si aan habooneyn, taasoo dadka kale ay aad ula yaabaan.
Ka dhex baxa bulshada
Iskitsofareniya dadka qaba waxa laga yaabaa inay gooni isu takooraan ama ay guri isku soo xidhaan. Ka gooni ahaanshada waxa la xidhiidhi kara khiyaali kale, xanuunka fikirka ama xirfada arrimaha bulshada oo wiiqma iyo cabsida uu ka qabo dhexgalidda dadka kale.